नेपालले थाइल्याण्डसँग ७० रनले पराजित, उपाधि जित्नबाट चुक्यो ! | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ ११ शनिबार, ०९:१२
नेपालले थाइल्याण्डसँग ७० रनले पराजित, उपाधि जित्नबाट चुक्यो !
२०७५ माघ ५ गते प्रकाशित, l १६:४५
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाली महिला क्रिकेट टिम पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्नबाट नराम्रोसँग चुकेको छ । २००७ मा पहिलो सहभागितामा नै एसीसी वुमन्स च्याम्पियन्ससिपको फाइनल पुगेको नेपाल १२ वर्षपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनलका लागि खेलेको थियो।
तर, आयोजक थाइल्याण्डसँग ७० रनले पराजित हुँदै टी २० स्म्यास क्रिकेटको उपउपाधिमा चित्त बुझाएको छ । घरेलु टोली च्याम्पियन बनेको छ । थाइल्याण्डले दिएको १२२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल १७.२ ओभरमा ५१ रन बनाउँदा अलआउट भयो ।
नेपालका लागि नेरी थापाले १७ र सीता राना मगरले १३ रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सवुमनले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली २० ओभरमा मात्र १ विकेट गुमाएर १२१ रन बनाएको थियो । थाइल्याण्डका ओपनर नाथाखन चान्थमले अटआउट ६९ रन बनाएकी थिइन् ।